VaMutambara Vanoti Havasi Kusiya Chigaro Chavo muHurumende
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, VaEdwin Mushoriwa, vati danho ratorwa naVaMutambara, idanho rakaburitswa mazuva apfuura nemapepanhau nenhepfenyuro zvehurumende zvakarerekera kuZanu PF, zvinove zvisina kunyanya kuvashamisa.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, vaudza Studio 7 kuti bato ravo harineyi nekurwisana kuri muMDC yaVaNcube.
Sezvo nyaya iyi ichibata mapato ose ari muhurumende, mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vaudzawo Studio 7 kuti bato ravo harikwanise kutaura nezvazvo sezvo iri nyaya yevatungamiri vari muhurumende yemubatanidzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaCharles Mutasa, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi hazvishamise nekuti bato iri rinozivikanwa nekuisa vanhu muhurumende vasina kuvhoterwa nevanhu musarudzo dzenyika yose.
Hurumende yemubatanidzwa yatarisana nedambudziko guru zvichitevera kurambira pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, kuri kuitwa naVaArthur Mutambara, avo vakabviswa pachinzvimbo ichi nebato ravo zvichitevera kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri mutsva webato iri, VaWelshman Ncube, pamusangano we congress wakaitwa mwedzi wapfuura.
VaMutambara vanoti havasi kuzosiya basa ravo vachiti hapana bato rezvematongerwo enyika rinogona kuvabvisa pachigaro pamadiro kana pachitevedzwa bumbiro remitemo yenyika riri kushanda iye zvino.
Vachitaura nevatori venhau muHarare neMuvhuro, VaMutambara vati vamwe vavo vari kufunga zvekuvabvisa muhurumende vava kupinda nemwenje mudziva. Vati vacharamba vari mutevedzeri wemutungamiri wehurumende kudzamara nyaya iri kumatare edzimhosva yapedza kuzeiwa.
Chimwe chikwata chemu MDC yava kutungamirwa naVaNcube vakaenda kumatare edzimhosva vachipikisa hutungamiri hutsva hwaVaNcube nevamwe vavo. VaMutambara vati hazvina musoro kuti ivo vasiye basa mubato ravo muine makakatanwa ari mumatare edzimhosva.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirirwa naVaNcube, VaEdwin Mushoriwa, vati danho ratorwa naVaMutambara, idanho rakaburitswa mazuva apfuura nemapepanhau nenhepfenyuro zvakarerekera kuZanu PF, zvinove zvisina kunyanya kuvashamisa. VaMushoriwa vati vanoshamiswa nemashoko aVaMutambara avo vakakorokotedza VaNcube necamwe vavo pavakasarudzwa.
Ukuwo mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, vaudza Studio7 kuti bato ravo harineyi nekurwisana kuri muMDC yaVaNcube.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vaudzawo Studio7 kuti bato ravo harikwanise kutaura nezvazvo sezvo iyi iri nyaya yevatungamiri vari muhurumende yemubatanidzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaCharles Mutasa, vanotiwo zviri kuitika izvi hazvishamise nekuti bato iri rinozivikanwa nekuisa vanhu muhurumende vasina kuvhoterwa nevanhu musarudzo dzenyika yose.